နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှပေးပို့သော အာဆီယံ-ဟောင်ကောင်(တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီမှုစာခ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံ တော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့သောအာဆီယံ-ဟောင်ကောင်(တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီမှုစာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ၂၈ရက်က အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် (တရုတ်)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ်အား အတည်ပြုရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ပေးနိုင်ရန်စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက် အောင်ကဖေဖော်ဝါရီ၂၈ရက်က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၁ရက်မြောက် နေ့တွင်တင်ပြခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့်အတူ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များအား သဘောထားရယူရာ သဘောတူညီသည့်အတွက် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လှိုင်းဘွဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ချိုက ”ဟောင် ကောင်က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သီးခြား အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်ပြီး အာရှ ကျားတစ်ကောင်အနေနဲ့ရပ်တည် နေခဲ့တာဖြစ်လို့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုအရှိန်အဟုန်ကောင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ခြားကုန်သွယ်ဘက် နိုင်ငံအများ အပြားရှိတာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေ အ တွက် အထောက်အကူအများကြီး ပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင် ကောင်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်မှာ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ အ တွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း အများကြီး တိုးတက်လာနိုင်သလို ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍလည်း အများကြီး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြောသည်။
အဆိုပါအာဆီယံ-ဟောင် ကောင်(တရုတ်)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်သည် နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအများကြီးအ ထောက်အကူဖြစ်လာစေနိုင်သော်လည်း စာချုပ်ပါစည်းကမ်းများ အရမိမိနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများဝင် ရောက်လာရာတွင်နိုင်ငံ ၏ အခြေအနေအရမငြိမ်သက်မှုစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဦးခင်ချိုက ”မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိကာလအထိ ကုန်သွယ် ရေးကဏ္ဍမှာ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကြောင့် ပို့ကုန်မြှင့်တင်နိုင်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ကုန်နဲ့ သွင်းကုန် အလွန်အမင်း ကွာဟမှုမဖြစ်အောင် အမြဲသတိထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာချုပ်ပါစည်းကမ်းတွေ အရ လည်း မိမိနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရ မငြိမ်သက်မှု စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာ တဲ့အခါမှာ မဖြစ်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လို မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါမှလည်းဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာ ချုပ်ဟာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအများကြီး အထောက်အကူဖြစ်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တရုတ်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့သည် အများဆုံးဖြစ် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် MIPP ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအရ နှစ် ၂ဝ အတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၂ဝ ဘီလီယံရရှိနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်ငါးရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာစကားပြော စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကိုယ်စားပြုအသင်းနှင့် ဒဂံ?
အနိုင်ကျင့်ခံရသော ကျောင်းသားများကို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရရန် ဖလော်ရီဒါ ဥပဒေ ခ
အသက်လေးဆယ် ကျော်ပေမယ့် အသက်နှစ်ဆယ်ကဲ့သို့ လှပနေတဲ့ ကင်ဟေးဆူး